သင်၏ယေဘုယျ VIBE နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ရေဘူးကဘာကိုအတိအကျပြောနိုင်သည် - သတင်း
သင်၏ယေဘုယျ Vibe နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ရေဘူးကဘာကိုအတိအကျပြောနိုင်သည်
တစ်ချိန်ချိန်နှင့်လူတိုင်းပြန်လည်သုံးနိုင်သောရေပုလင်းများကိုစတင်သုံးစွဲလာကြသောအခါမည်သူမျှမသိကြပါ။ တစ်ခါက weirdos အတွက်ပဲ။ ပြီးတော့ရုတ်တရက်သူတို့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ ဘတ်စ်ကားများ၏နှစ်ဖက်အပေါ် Chilly ရဲ့ကြော်ငြာ။ လူတစ် ဦး သည်တစ်ကြိမ်သာသောက်သောပုလင်းထဲမှသောက်ရန်သင့်အားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကံကောင်းတာကကမ္ဘာ၏ content- ကုန်သည်များအတွက်, ပြန်သုံးနိုင်သောရေပုလင်းသူတို့အမှန်တကယ်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး embody ရှိရာအမှတ်မှချွတ်ယူကြပြီ။
ဒါအမှန်ပဲ။ သင်ရွေးချယ်သောရေဘူးသည်သင်၏အထွေထွေ Vibe နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုဖော်ပြသည်။
တကယ်ကပြော၏အခြားမည်သည့်လမ်းမရှိပါ။ သင် shit ပါပဲ။ ပုံထိပ်, အခြားလူတိုင်းအပေါ်ကိုဆင်းရှာဖွေနေ။ လူတွေကမင်းကို VSCO မိန်းကလေးလို့ပြောရင်မင်းကသရော်ကြလိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းကသာမန်ထက်ပိုတဲ့ရေပုလင်းထဲကကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုထက်ပိုပြီးအကုန်သုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကသူတို့က Hydro Flask မပိုင်ဆိုင်လို့ပဲ။ သူတို့၏မနာလိုမှုသည် Hydro Flask မရှိခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသည်မှာရိုးရှင်းပြီး၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အရူးသေမည်။
သင်အလယ်အလတ် bit ထဲမှာ citrus အသီးများသို့မဟုတ်သခွားသီးအချပ်ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာမဆို
ခင်ဗျားဟာmassiveရာမမီးလျှံ၊ ရေအတွက်အရမ်းကောင်းပါသလား သာမန်၊ ချစ်စရာကောင်းသော၊ အရသာမရှိသောရေအတွက်အရမ်းကောင်းပါသလား။
နှစ်လီတာရေပုလင်းတစ်လုံးမတော်တဆဝယ်မိသောသူဘယ်သူလဲ? ရှုထောင့်အဘို့, ဒီဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲ pic.twitter.com/7J0Zz1JnEY
- Janet Devlin? (@JanetJealousy) ပြီလ 5, 2019
အဆိုပါအားကစားရုံစွမ်းအင်များစွာသောနေဆဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကြွက်သားများအညီအမျှအလုပ်မလုပ်ဖို့ဘယ်လိုမသိသူတစ်စုံတစ် ဦး ၏စွမ်းအင်ပါပဲ။ သငျသညျလိုက်တယ်ပခုံး, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ခြေထောက်ရရှိပါသည်။ ခင်ဗျားဟာပကတိယူနစ်တစ်ခုပဲ၊ မင်းရဲ့ရေဘူးလည်းအတူတူပဲ။
ဒါကိုသုတ်လိမ်းဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူး - သူတို့ရဲ့အဓိကရေတိုက်ပွဲမှာပရိုတိန်းရှာတာကိုအသုံးပြုတဲ့သူမည်သူမဆိုထူးဆန်းတဲ့အားကစားရုံစွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ သူတို့ကရပ်ဂ်ဘီဘောင်းဘီတိုများနှင့်အမြဲတမ်းလှန်လှန်ကြည့်ရသည့်အခွင့်အရေး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ဤပုလင်းသည်သူတို့နှင့်အမြဲရှိနေသည်။ သင်၏ကျောင်းသားအိမ်၌ကပ်ထားသောကော်ဖီစားပွဲတိုင်းကိုချိုးဖောက်လုနီးပါးဖြစ်သည် - ဘယ်တော့မျှမချပါနှင့်။
အဆိုပါ bobble သူတွေကို
သငျသညျ check လုပ်ထားရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်သင်၏အမေသင့်မျက်မှန်ဝယ်ယူ။ ဒါ့အပြင်သင်သည်ထိုသူတို့ထဲကရေမဆိုရရန်ဤကောင်းသောအရည်ရွှမ်းပေးရမယ်။ သင်မသိမှီပြန်လည်အသုံးပြုမှုပုလင်းများသို့ပြန်ရောက်ပါလိမ့်မည်။
သင်ဖျားနေသောကြောင့်သင်၏အအေးမိနေသောပုလင်းမရှိပါ။ သင်တစ် ဦး တည်းပိုင်လျှင်သင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်။ သူတို့ပြောတာကိုမင်းသိတယ်၊ ၁၀ နာရီပူတယ်၊ ၁၀ နာရီအေးတယ်။ ဒီဟာသဆင်းသက်ရန်အအေးအစိတ်အပိုင်းသည်အရေးမပါ။
သူတို့ Glastonbury တွင်လုပ်သောသတ္တုဘူးများ
သူတို့အပေါ်မှာ? သူတို့ဟာ Glastonbury တုတ်အိတ်တွေပါ။ ပြီးတော့ဒီလူမှာ Glasto မှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့သတ္တုရေဘူးတစ်ခုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ပါ။ ဒီနှစ် #GlastonburyFestival သည် #pluseplastic ရေပုလင်းများမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကြီးမားတဲ့ ?? ပူပြင်းသည့်ရာသီဥတုရှိစေရန်လူအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်မမောနိုင်မပန်းနိုင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် @WaterAid စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး။ ပြီးတော့ #sirdavidattenborough ဆိုတဲ့စကားလုံးက 'ဒါကမင်းကမင်းမသောက်ရသေးတဲ့ရေတစ်သန်းကျော်ရေဘူး။ ' ' ဒီပွဲတော်အတွက်ငါတို့ထောက်ပံ့ပေးသော # Glastonbury #RAW ပုလင်းများဒီမှာ။ ။ ။ ။ #glasto #reusablebottle #reuse #wateraid #plasticfree
မျှဝေသည် RAW ပုလင်းများ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ ညနေ ၃း၅၅ တွင် PDT တွင် (@rawbottles)
Glasto တွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဝါဒကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူတစ် ဦး ထက် ပို၍ လေးစားဖွယ်ကောင်းသော၊ ငါးရက်လုံးလုံးအလေးမထားတဲ့ ketamine နဲ့ရေပန်းမပြဘူး။
ကောက်ရိုးအားလုံး squidgy ဖြစ်နှင့်တက်ဝါးဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျ uni မှာအားကစားနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ကျော်နေ, ဒါမှမဟုတ်သင့်အဖေကဒီရေပုလင်းကိုပေး။ သင်ပြန်ပေးရမေ့လျော့။ တကယ်လို့မင်းကိုယ်တိုင်အပြင်ထွက်ပြီးဝယ်လိုက်ရင်မင်းဟာအသက် ၄၀ အရွယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့မှန်ထဲမှာကောင်းကောင်းကြည့်ဖို့လိုတယ်။
သငျသညျအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည် Tatty တစ်ခုတည်းအသုံးပြုပလပ်စတစ်ပုလင်း
လူများသည်ဤပုလင်းအတွင်းရှိပလပ်စတစ်ကိုသင်ဖြည့်သည်တိုင်းရေထဲသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစိမ့်ဝင်လာသည်ဟုလူတို့ပြောသောအခါသင်ဂရုမစိုက်ပါ။ သငျသညျပတ်ဝန်းကျင်ဂရုစိုက်သောကြောင့်, ပုလင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်ပါဘူးသင်အမှန်တကယ်နည်းနည်း rancid ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကပြန်လည်သုံးသပ်။ သင့်ရဲ့ခရစ္စမတ်စာရင်း, ပွင့်ချပ်ပေါ်မှာထားပါ။
ဘယ်လို fuck ဆိုတဲ့သင်ရဲဝံ့ တစ်ခုတည်းသောပလပ်စတစ်ရေပုလင်းတစ်လုံး ၀ ယ်တာထက်ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာအပြစ်ပိုဆိုးနေသလား။
သင်သည်ပျံသန်းမှုများစွာပြုလုပ်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပလတ်စတစ်များကိုသာမန်အမှိုက်ပုံထဲသို့ထည့်ပြီးကြီးထွားမှုအခြေခံသောစားသုံးသူအရင်းရှင်စနစ်၏ပုံစံကိုရှောင်ခြင်းသည်စိတ်ကူးယဉ်သည်၊ သို့သော်လက်တွေ့မကျပါ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖက်ရှင် ၀ ယ်တာကိုရပ်လိုက်ရင်ဘာထူးခြားမလဲ။ အခြားလူတိုင်းကလုပ်တယ်။
မင်းကိုထိန်းသိမ်းထားတယ် ဆံပင်ကနေရာမရှိလက်မမဟုတ်၊ သင်၏ Instagram ဇယားကွက်ပေါ်ရှိစာမူတိုင်းသည်အချို့သောအရောင်များကိုလိုက်နာသည်။ Voss (စိတ်မကောင်းပါ၊ VOSS) ပုလင်းတစ်လုံးတည်းကို အသုံးပြု၍ ယင်းကိုအမှန်တကယ်ဖက်ရှင်ကြေညာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း? လှပသောရိုးရှင်းသော။
သင်ဤပုံ၌ The Rock ၏ poundshop version ဖြစ်သည်။
@Vossworld ၏တရားဝင်ပါတနာအဖြစ် VOSS ၏သစ္စာရှိသူ Dwayne Johnson @therock ကိုကြာမြင့်စွာကြေငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာသည်။ အတူတူအတူတကွသင့်အားဘဝမှထွက်ခွာသွားရန်နှင့် #LiveEveryDrop ကိုရရှိရန်သင့်အားစေ့ဆော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် VOSS နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာသံပရဒိသုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းများဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်သဘာဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထူးခြားသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မိတ်ဖက်ရန်မျှော်လင့်သောကြောင့်လူတန်းစားများရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ကမ္ဘာကိုဆန်းသစ်တီထွင်ရန်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်ရန်မျှော်လင့်သောကျွန်ုပ်တို့နှင့်မိတ်ဖက်ရန်မျှော်လင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတူတကွကြီးစွာသောအရာများကိုတည်ဆောက်မည် ။- @therock ?? partnership မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် BIO ထဲ၌ LINK ကိုစစ်ဆေးပါ။
မျှဝေသည် VOSS ရေ PDT သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ (၆:၅၉) တွင် (@vossworld)
ဂန္ထဝင် Nike အားကစားပုလင်း
သင်သည်သင်၏ကလေးဘဝတွင်နောက်တဖန်မပါ ၀ င်ပါကသင်အမိဝမ်းထဲသို့ပြန်ဝင်သွားလိမ့်မည်။ သင်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကတည်းကဤပုလင်းကိုသင်ရရှိခဲ့ပြီးသင်တစ်စုံတစ် ဦး ကအရှိန်မြှင့်သည့်မှိုနှင့်တူသည်။ ew fuck ဆိုတဲ့။
•ငါဘယ်လိုအဖမ်းခံရလဲဆိုတာကို Extinction Rebellion အတန်းထဲတက်ခဲ့တယ်